Posted on March 2, 2009April 28, 2009 by kyawkyawoo	Posted in islamTagged allah, ကုရအန် အကြောင်း, ကုရအန်ကျမ်းတော်မြတ, ကျမ်းမြတ် ကုရအန်, ဖန်ဆင်းရှင်တစ်ဆူတည်းကိုယုံကြည် သောဝါဒြ, ဖန်ဆင်းရှင်ရှိသည်, အာရေဗျကျွန်းဆွယ, ရိုင်းစိုင်းသော ဘာသာမဲ့များ, burmese muslim, burmese muslim minority, Burmese Muslims, English Translation by Abdulah Yusuf Ali, Invitation to all Muslim Minorities, islam, Islam ကိုနားလည်ခြင်း, Myanmar Muslim, myanmar muslim minority, panthay muslims, religion. military junta of burma, Who is Allah	ပြီးခဲ့သည့် post တွင် ဖန်ဆင်းရှင် ရှိမရှိ စဉ်းစားရန် တင်ပြခဲ့တယ်။
ရိုင်းစိုင်းသော ဘာသာမဲ့များဖြစ်တယ်။ တမန်တော်မြတ် မိုဟာမဒ် (PBUH)ပထမဗျာဒိတ်တော်ရပြီးနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် အတွင်း အာရေဗျကျွန်းဆွယ်တခုလုံး မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲ သွားခဲ့ တာကျမ်းမြတ်ကုရအန် ရဲ့အဆုံးအမကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Say:1. He is Allah, the One and Only! Allah သည်တစ်ဆူတည်းသောကိုးကွယ်ရာအရှင်ဖြစ်ခြင်း 2.Allah, the Eternal,Absolute;
3 thoughts on “Islam ကိုနားလည်ခြင်း (Part 2) Who is Allah?”	March 2, 2009 at 8:41 pm	Haleemar says:
Pingback: Islam ကို နားလည်ခြင်း (Part 3) Is the Quran Allah’s word? « Kyawkyawoo’s Weblog April 20, 2012 at 3:42 pm	KZL says:
Islam ကိုနားလည်ခြင်း(Part 1)Indonesia Tightening The Rules on Polygamy